Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu qaatay go’aan lagu taageeray Yahuuda – DMS
HomeWararkaSiyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu qaatay go’aan lagu taageeray Yahuuda
Kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ay u yeertay Faadumo C/laahi Maxamuud (Faadumo Insaaniya) oo ah safiirka Soomaaliya ee Geneva iyo xarunta Qaramada Midoobe ee xuquuqul Insaanka ee magaalada Geneva.
Warqad uu qoray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa loogu yeeray safiiradda oo loogu baaqay in muddo todobaad gudaheed ah dalka kusoo gasho.
Talaabadan ayaa ka dambaysay, kadib markii safiiradda ay ka aamustay go’aankii Trump looga soo horjeeday ee ahaa inay Israa’iil leedahay buuraha Golan Heights.
Lama oga sababaha ka dambeeyey go’aanka safiiradu uga aamustay qaraarkaas, ha yeeshee waxaa muuqata in dowladda Soomaaliya ay ka carootay in safiiradu ka aamusto go’aankaas.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah siyaasi ka hadlo arrimaha siyaasadda dalka ayaa sheegay inaysan dhici karin in safiir uu qaato go’aan Caalami ah.
“Ma jiro safiir go’aan qadiyad caalami ah ka qaadan kara iyada/ isaga oo aan la tashan madaxda sare ee dalka waa la ogyahay cida go’aanka qaadatay iyo cida ku cadaadisay intaba” ayuu yiri Cabdiraxmaan oo qoraal kusoo qoray Facebookiisa.
” Madaxweynuhu waa in uu si geesinimo leh masuuliyada u qaadato oo uu san Safiirka madaxfurasho ka dhigan, wasaaraduna warqado shacabka ku jahwareerin” ayuu sii raaciyey.
“Safiiradu waa in ay cadayso in go’aanku amar dawlad ahaa ee aysan aqbalin in maalmo Muqdisho la keeno, kadibna shaqadeeda lagu celiyo iyaduna eeda qaadato” ayuu yiri mar kale siyaasi Cabdiraxmaan.
Cabdiraxmaan ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey inuu hore uga aamusay go’aankii lagu cambaareeyey in Qudus ay tahay Caasimada Israel.
“Sidan oo kale ayuu madaxweyne Farmaajo ku cadaadiyey safiirka Soomaaliya Qaramada Midoobe u fadhiya in uu ka aamuso go’aankii lagu canbaareeyey in Qudus ay tahay Caasimada Israel hadii uu madaxweynuhu ku qanacsan yahay in ay aamusnaanta go’aanadan dani ku jirto, ha yeesho geesinimo uu masuuliyada go’aanka ku qaato laakiin ma dhici karto laga soo bilaabo dhiibistii Qalbidhagax in la yiraahdo madaxweynuhu ma ogayn” ayuu hadalkiisa sii daba dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur.